काे-राेना ठीक भएपछि पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिइएन भने ज्या`नेै जान सक्छ ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काे-राेना ठीक भएपछि पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिइएन भने ज्या`नेै जान सक्छ ! अहिले कस्तो छ अवस्था ? कि अझै समस्या छ ? रिपोर्ट त नेगे’टिभ आयो नि ? तपाइँमध्ये कतिले आफ्ना आफन्त वा साथीभाइसँग पछिल्ला केही समय देखि यस्ता प्रश्न राख्दै आउनुभएको छ होला । हो, धेरैजसोले को-रोना विरु-द्धको ल-डाइँ जितिसके तर यसबाट मु-क्ति भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन ।
को-रोना मुक्त भएपछि कतिपय मानिसले अन्य समस्या पनि सामना गरिरहेका छन् । कसैलाई छिटै थकाइ लाग्ने त कसैलाई सास लिन समस्या भइरहेको होला । कसैलाई मु-टुको समस्या त कसैलाई अन्य समस्याहरु देखिन थालेको सुन्न र देख्न पाइन्छ । चिकित्सक हरुका अनुसार को-डिभ केयर अ-र्थात को-रोनाबाट मु-क्त भएपछि पनि स्वास्थ्यको ख्याल राखनु उतिकै आवश्यक रहन्छ । शरीरमा को-राेनाको असर:- धेरैजसो मानिसले कोभि-डलाई सामान्य रु-घा खोकिजस्तै बिरामी ठान्छन् र यसले केवल फो’क्सोमा मात्र असर गर्ने सम्झिन्छन् तर त्यस्तो होइन ।
को-भिड नयाँ संक्रमण भएकाले यसले शरीरका अन्य कुन–कुन अंगमा असर गर्छ भन्ने कुरा विस्तारै–विस्तारै बाहिर आइरहेका छन् । यसले मानिसको मुटु, दिमाग, मांसपेसी, धमि-नी र नसा, रगत, आँखाजस्ता शरीरका अन्य अंगमा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेको छ । यही कारणले हृद-यघा-त, डिप्रे-सन, थकान, शारीरिक दुःखाइजस्ता समस्याको सामना संक्र-मणमु-क्त भएकाहरुले गरिरहेका छन् ।
हल्का लक्षण भएको काे-रानाबाट निको भएपछि के गर्ने ? :- चिकित्सकहरुले हल्का लक्षण भएको को-भिड देखिएका धेरैजसो मानिसहरु घरमै ठिक भए पनि पोस्ट को-भिड केयर आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरु धेरैजसोमा शारीरिक कमजोरी, थकान, भोक नलाग्ने, दुःखाइ, शरीरको ताप-मान बढ्ने, ड-रजस्ता समस्या देखिने हुँदा निको भएपछि यस्ता समस्या देखिन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसका लागि चि-कित्सकहरुले यस्ता सुझाव दिएका छन्:-
१) भरसक तातो वा मनतातो पानी पिउनुहोस् । दिनमा २ पटक बाफ अवश्य लिनुहोस्। कम्तीमा ८ देखि १० घन्टा अवश्य सुत्नुहोस् । २) संक्र-मणमु-क्त भएपछि हरेक ७ मा चिकि-त्सकसँग अवश्य स्वास्थ्यजाँच गराउनुहोस् ।
३) खाना खान मन लाग्दैन भने पनि थोरै–थोरै गरी खानुहोस् । पानी पनि सही मात्रामा पिउनुहोस् । ४) नियमित योग तथा प्रणा-याम गर्नुहोस् । एकैपटक थुप्रै काम नगर्नुहोस् । ५) संक्र-मणमु-क्त भएको १५–३० दिनसम्म अ-क्सिजन, ज्व-रो, रक्त-चाप, सुगरको नियमित जाँच गर्नुहोस् ।
६) यदि हल्का लक्षण देखिएको छ तर आफूलाई स्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ भने १४ दिन घरमै आइ-सोलेसन बस्न सक्नुहुन्छ । ७) निको भएपछि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । हरियो सागसब्जी र प्रो-टिनयुक्त खाना धेरै खानुहोस् । यसले को-रोना बाट कम-जोर बनेको शरीरको प्रतिरो-धात्मक क्षमता बढाउँछ ।
चिकित्सकहरुले सं-क्रमणमु-क्त भएको १०–१५ भित्रै नियमित काममा फर्किन सकिन्छ तर चिकित्सकले कुनै औषधि खान सल्लाह दिएका छन् भने अवश्य खानुहोस् । नियमित चिकित्सकको सल्लाह पनि लिनुहोस्। को-रोना मु-क्त भएकाहरु धूम-पान र मद्यपा-नबाट टाढै बस्नुपर्ने चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । कम ग-म्भीर र धेरै ग-म्भीर लक्षण भएका बिरामीले को-रोना मु-क्त भएपछि के गर्ने ?:-
१) चिकित्सकको रायसल्लाहअनुसार दिनच-र्या बनाउनुपर्छ । २) केही बि-रामी निको भएपछि मांस-पेसी क-मजोर भएको हुन सक्छ त्यसैले प्र-चूर मात्रामा प्रोटिन-युक्त खाना खानुपर्छ । ३) केही बिरामीमा निको भएपछि पनि औष-धिको साइड इफे-क्ट हप्तौँसम्म रहन सक्छ त्यसैले निको भएपछि नियमित रुपमा शरीरमा देखिने समस्याका विषयमा चिकित्सकसँग रायसल्लाह लिनुपर्छ।
४) कम ग-म्भीर र धेरै ग-म्भीर लक्षण भएको को-रोना संक्र-मणबाट मु-क्त भएका बिरा-मीहरुले शरीरमा पानीको मात्रा सही राख्नका लागि तरल पदार्थ सेवनमा बढी जोड दिनुपर्छ । ५) ताजा खाना नै खानुपर्छ । ६) शारीरिक थकान हुने गरी एकैपटक धेरै काम गर्नुहुन्न । ७) यस्ता बिरा-मीलाई पूर्ण रुपमा निको हुन ३ महिनासम्म लाग्ने भएकोले आराम गर्नु नै ठिक हुन्छ ।
८) यस्ता बिरामीले निको भएपछि नियमित रुपमा शरीरमा अक्सि-जनको मात्रा चेक गर्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्ला-ह बमोजिम अन्य जाँच पनि नियमित राख्नुपर्छ । ९) निको भएपछि व्यायाम र प्रा-णायाम गरेर दिनको सुरुआत गर्नुपर्छ । १०) मानसिक तना-व लिनुहुन्न । ११) मास्क अनि-वार्य रुपमा लगानुपर्छ । हात बारम्बार धनुपर्छ । सामाजिक दू-री कायम गर्नुपर्छ। १२ संक्रम-ण मु-क्त भएपछि चिकित्सकको नियमित फलोअप जानुपर्छ। कुनै जाँच गर्नुछ भने गर्नुपर्छ । -बिजसाला बाट
Nextरातारात चमत्कार ! धन प्राप्तिका लागि सुत्नुअघि राख्नुहोस् सिरानीमुनी यी ५ चिज! ॐ लेखी तुरुन्तै हेर्नुहोस